ဆေးခြောက်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားများ - ဆေးခြောက်လုပ်ငန်းရှေ့နေ၊ လိုင်စင်ရဆေးခြောက်အတွက်စီးပွားရေးရှေ့နေများ
LLCs, S-Corp နှင့် C-Corp စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများအကြားမည်သို့ကွာခြားမှုရှိသနည်း။ သင့်လုပ်ငန်းအတွက်ဘယ်ဟာကမှန်တယ်? သင်၏ကုမ္ပဏီကိုအထက်မှအောက်သို့ကျွန်ုပ်တို့အကဲဖြတ်ပြီးသင်၏ဆေးခြောက်စီးပွားရေးကိုအများဆုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရန်သင့်အားကူညီပေးပါသည်။
ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Entity ရွေးချယ်ရေး
သင်တစ် ဦး ဆေးခြောက် entity ရွေးချယ်ရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်သည့်အခါအချိန်များတွင်, သင် သင်၏အခွင့်အရေးနှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများနှင့်မတူသည့်အဓိကစီးပွားရေးအဆောက်အအုံသုံးခုကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်သင်၊ LLC၊ C ကော်ပိုရေးရှင်း (S-corp) သို့မဟုတ် S ကော်ပိုရေးရှင်း (S-corp) ကိုသင်စဉ်းစားနိုင်သည်။ အဆောက်အ ဦး သုံးခုစလုံးသည်သင့်အားအချို့သောအားသာချက်များကိုပေးသည်။
မည်သည့်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့စည်းမည်ကိုဆုံးဖြတ်သည့်အခါသင်၏လုပ်ငန်း၏ရှုထောင့်အားလုံးကိုစဉ်းစားသင့်သည်။ LLCs သည်သင့်ပြည်နယ်တွင်အခွန်ပေးဆောင်ရန်မတူညီသောဖြစ်နိုင်ခြေများကိုပေးစွမ်းနိုင်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အခွန်ကောက်ခံမှုနည်းလမ်းများကိုပေးသည်။ LLCs တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္finာရေးကိုကာကွယ်ရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ အကြောင်းမှာအခွန်ကောက်ခံခြင်းသည်ပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထို့အပြင်အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကော်ပိုရိတ် entity ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းထက်အများကြီးပိုမြန်ပြီးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူတို့ရဲ့အားသာချက်ရှိသည်သောကော်ပိုရေးရှင်းပုံစံနှစ်ခုရှိပါတယ်။ S-corp ဖြင့်စီးပွားရေးသည်ကော်ပိုရိတ် ၀ င်ငွေခွန်ကိုမပေးဆောင်နိုင်ဘဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလည်းကာကွယ်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင့်အနေဖြင့် ၀ င်ငွေနှင့်အခွန်သက်သာခွင့်ရှိသည့်စရိုက်လက္ခဏာများရှိသည်။
C-corp ဖြင့်သင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာရန်ပုံငွေများစုဆောင်းနိုင်သည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းများသည်ဖြတ်သန်းသွားလာနေသောအဖွဲ့အစည်းများမဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာပိုင်ရှင်များသည်တစ် ဦး ချင်းအခွန်ပေးဆောင်ခြင်းမှဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းသာဝင်ငွေခွန်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
တရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းများ၏ပုံစံအားလုံးသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီကိုကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စီးပွားရေးအစီအစဉ်နှင့်ဘဏ္financialာရေးအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ သင့်အနေဖြင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီမှအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်စီးပွားရေးတည်ဆောက်ပုံတစ်ခုစီ၏အားနည်းချက်များကိုလည်းသင်စဉ်းစားသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဆေးခြောက်ရှေ့နေနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းသည်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးမားသောအားသာချက်ကိုပေးနိုင်သည်။ မှန်ကန်သောဆေးခြောက်ရှေ့နေနှင့်သင်ရွေးချယ်စရာများအားလုံးကိုသင်စဉ်းစားနိုင်ပြီးသင်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သောဆေးခြောက်အဖွဲ့အစည်းရွေးချယ်မှုကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
မင်းရဲ့ဆေးခြောက်လုပ်ငန်းအတွက် LLC ကိုဘာကြောင့်သုံးရတာလဲ။
လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီ (LLC) သည်သီးခြားခွဲခြားထားသောတရားဝင်ဆေးခြောက်အဖွဲ့အစည်းရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ LLC နှင့်သင်အခွန်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ရနိုင်သည်။ သင်ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီးသင်၏အမည်ဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်နိုင်သည်။ တာဝန်ယူမှုအကန့်အသတ်ရှိသောကုမ္ပဏီများသည်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်မိတ်ဖက်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောစီးပွားဖြစ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ပုဂ္ဂလိကကန့်သတ်ချက်ရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆက်ဆံခံရမည့်အစားကော်ပိုရိတ်အခွန်စည်းမျဉ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် LLCs သည်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူသောဖွဲ့စည်းမှုကိုပေးသည်။
အကယ်၍ သင်သည် LLC တစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်ဆုံးဖြတ်ပါက၊ အခြားသောလုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပို၍ ရိုးရှင်းစွာတွေ့လိမ့်မည်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖွင့်ခြင်းထက်“ တရား ၀ င်” နည်းသည်၊ အဓိကအားသာချက်များမှာ -
LLC ၏ပိုင်ရှင်များသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အခွန်ကောက်ခံမှုနည်းလမ်းများရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကုမ္ပဏီအားမည်သို့အခွန်ကောက်ခံမည်ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခွန်စည်းကြပ်မှုများကိုအသုံးပြုနေစဉ်စီးပွားရေးဝင်ငွေရှိရှယ်ယာများအပေါ်သင်အခွန်ပေးဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အခွန်ကောက်ခံမှုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်ပိုင်ရှင်များနှင့်အခွန်တာဝန်ဝတ္တရားကိုခွဲခြားသောကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်အခွန်ကောက်ခံရဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အခြေအနေနှစ်ခုလုံးသည်အကျိုးရှိနိုင်သည်၊ သင်၏ရွေးချယ်မှုသည်သင်၏လုပ်ငန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်သင်ထားရှိရန်စီစဉ်ထားသောအခွန်ပုံစံပေါ်တွင်မူတည်သည်။
LLC သည်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကိုပေးသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကိုလံဘီယာခရိုင်အပါအ ၀ င်ပြည်နယ် ၅၀ လုံးတွင်သင်၌ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အခွန်ကောက်ခံမှုနည်းလမ်းများရှိသည်။ LLC နှင့်သင်၌ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာ ၀ န်အကန့်အသတ်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည့်အခြားအကောင်းမြင်မှုများရှိသည်။ ဤကန့်သတ်သောတာ ၀ န်ယူမှုသည်စီးပွားရေးကြွေးမြီများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကြွေးမြီသို့မဟုတ်တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ကာကွယ်ရမည်။ ဒါကြောင့်သင်က LLC ၏ပုံစံဖြင့်ဆေးခြောက်အဖွဲ့အစည်းရွေးချယ်ရေးဖွဲ့စည်းရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ္finာရေးကိုကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ် ဦး LLC လူအများစုများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း entity ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်တစ်ဝှမ်းရှိကုမ္ပဏီများအတွက် LLCs အများကြီးလုပ်ပြီးပြီ
ကော်ပိုရေးရှင်း (Inc) ကဘာလဲ?
ကော်ပိုရေးရှင်းပုံစံအမျိုးမျိုးယူနိုင်ပါတယ်။ လူကြိုက်အများဆုံးပုံစံသည်အခွန်စည်းကြပ်မှုကိစ္စတွင် LLC နှင့်ပိုမိုတူသော S-ကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အခွန်များသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များကို“ ဖြတ်သန်းသွားသည်။ S-corp ဆိုသည်မှာ LLC သည်တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံမဖြစ်လာမီအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်အများဆုံးအသုံးပြုခဲ့သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအခွန်မခံသောကြောင့် S-corp ကို“ pass-through” အဖွဲ့အစည်းဟုသတ်မှတ်သည်။ ၀ င်ငွေအားလုံးကိုပိုင်ရှင်များ၏အခွန်စည်းကြပ်မှုမှတ်တမ်းတွင်ဖော်ပြသည်။
S-corp နှင့် C-corp အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
S-corp နှင့်အတူပိုင်ရှင်များသည်အမြတ်အပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရပြီး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ကော်ပိုရိတ် ၀ င်ငွေခွန်ကိုမပေးဆောင်ရပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ကော်ပိုရိတ် ၀ င်ငွေခွန်ပေးရမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ၀ င်ငွေသို့မဟုတ်အရှုံးအားလုံးကို S-corp နှင့်အတူနှစ်စဉ်ပိုင်ရှင်များထံလွှဲပြောင်းပေးသည်။ S-corp ပုံစံတွင်ရှယ်ယာရှင်အရေအတွက်အကန့်အသတ်ရှိသည့် C-corp နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရှယ်ယာရှင် ၁၀၀ ကျော်သင်မရှိနိုင်ပါ။ သင်၌ S-corp ရှိပါကရှယ်ယာရှင်များသည်အမေရိကန်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်နေထိုင်သူနိုင်ငံခြားသားများဖြစ်ရမည်။
C ကော်ပိုရေးရှင်းများအနေဖြင့်အခွန်ကောက်ခံသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ကော်ပိုရေးရှင်းအဆင့်တွင်အခွန်ကောက်ခံသော taxable ဝင်ငွေနှင့်ကွဲပြားသည်။ ခွဲဝေဖြန့်ဝေသည့်အခြေအနေတွင် ၀ င်ငွေသည်တစ် ဦး ချင်းအဆင့်၌အခွန်ကောက်ခံသည်။ ကို C- Corps ပုံမှန်အားဖြင့် pass-through အဖွဲ့အစည်းများမရှိကြပေ။
အဆက်မပြတ်အဖွဲ့အစည်းရန်ပုံငွေဖြင့်ရန်ပုံငွေရှာခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌, C-corp အခြားမည်သည့် entity ထက်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းသည် C-corps နှင့်ပိုကောင်းသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ချဉ်းကပ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုရွေးချယ်ရာတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းများတွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်ကော်ပိုရေးရှင်းများသည်ရှယ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှတစ်ဆင့်ငွေကြေးအမြတ်အစွန်းများစွာရရှိစေသည့် ၀ န်ထမ်းများအားပိုမိုကောင်းမွန်သောရှယ်ယာမက်လုံးများထုတ်ပေးနေသည်။
C ကော်ပိုရေးရှင်းသည်ရန်ပုံငွေရှာဖွေရာတွင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သော်လည်းဤပုံစံကိုရွေးချယ်ရာတွင်အခွန်စည်းမျဉ်းများကိုအထူးဂရုပြုရန်လိုသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းသည်အဖွဲ့အစည်းအဆင့်တွင် ၀ င်ငွေခွန်ကိုခံရသည့်အခါ“ နှစ်ဆအခွန်” ကိစ္စများစွာရှိသည်။ ငါတို့သိသည့်အတိုင်းကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းသည်သမိုင်းကြောင်းအရမြင့်မားသောကြောင့်နှစ်ဆအခွန်ကောက်ခံမှုသည်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအတွက်ကြီးမားသောဘဏ္riskာရေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။